Alenka | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Tomato maka mpaghara Moscow: nkọwa nke ụdị kacha mma
Enwere ọtụtụ mkpụrụ osisi, ma ọ bụ karịa, iche, usoro nke na-eto eto nke na-adịghị ewe oge. Ụdị dị iche iche dị n'etiti tomato. Ọzọkwa, e nwere ụdị dị iche iche ga-adịgide ndụ n'okpuru ọnọdụ ihu igwe na mpaghara Moscow. Kedu ndị? Maka mkpọsa na mpaghara Moscow, e nwere ọtụtụ iwu ndị ga - enyere aka na osisi ma gbanwee ụdị tomato dị iche iche kwesịrị ekwesị: Saplings kwesịrị ịkpafu ngwa ngwa Wepụ kpam kpam nzọụkwụ niile Mgbe ọ bụla mmiri ozuzo kwụsịchara, a ghaghị iji ọgwụ phytophorosis na-emeso bushes. mmiri, tuo n'elu, wepụ mkpụrụ osisi ndị a na-adịghị asọpụrụ.
Eggplants siri ike ịghara ịhụ n'anya, ma ị na-etolite onwe gị nwere ike isi ike. Karịsịa, ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe anaghị ekwe ya. Ma ọ bụ nwoke na-arụrịta ụka na ọdịdị onwe ya ma gbagote ụdị eggplants, ọbụna maka ịmalite na mpaghara Moscow. N'otu oge ahụ, taa, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dị iche iche, na nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịnya isi maka ihe ndị pụrụ iche, mkpụrụ ma ọ bụ àgwà ndị ọzọ, na-eme ka otu n'ime ha sie ike.
Top 6 mma karọt iche
Okpokoro karọt malitere n'oge dị anya - ihe dịka puku afọ anọ gara aga. Ọ bụ taa ụdị ihe ọkụkụ a aghọwo ebe nkịtị maka anyị. Ma ozugbo ndị mmadụ nwere ekele maka karọt maka uto na uru ya. Ihe nzuzo ezighi ezi bụ na pulp nke a na-acha odo odo nwere ọtụtụ beta-carotene, nke nwere mmetụta dị mma n'iche ọhụụ.